Nọmba Prime: Ihe ha bụ na Ndepụta - UniProyecta
Nọmba ndị mbụ bụ nke ahụ ha nwere naanị 2 divider, ebe ọ bụ na ha na -eke naanị ha na otu, ya bụ, nọmba 1. Mana kpachara anya! Kedu ihe nke a pụtara? Dị mfe. Nọmba dị mkpa, dịka ọmụmaatụ 2, nwere ike kewaa naanị 2, -2, 1, na -1.
A na -akpọ ọnụọgụ nwere ndị nkesa karịa 2 nọmba mejupụtara. Ọ bụrụ na anyị ewere nọmba mejupụtara, dịka ọmụmaatụ, 10, anyị ga -ahụ na anyị nwere ike kee ya n'etiti onwe ya na ịdị n'otu, ya bụ, n'etiti 10 na 1, kamakwa n'etiti 2 na 5. Ya mere, 10 bụ nọmba mejupụtara.
1 Nọmba niile bụ nke mbụ ma ọ bụ nke ọtụtụ mejupụtara?
2 Etu ị ga -esi mara ma ọ bụrụ na ọnụọgụ bụ nke mbụ
2.1 Ihe nnọchianya nke Eratosthenes
2.2 Ụkpụrụ nkesa
3 Ndepụta nọmba dị mkpa sitere na 1 ruo 10.000
Nọmba niile bụ nke mbụ ma ọ bụ nke ọtụtụ mejupụtara?
E nwere mmadụ abụọ nọmba pụrụ iche nke na -adịghị mma ma ọ bụ ngwakọta: nke 0 na 1. Maka gịnị? Ka anyị hụ ya:
Enwere ike kewaa nọmba 1 n'onwe ya (1/1 = 1) yana ịdị n'otu, ya bụ, nọmba 1 (1/1 = 1). Agbanyeghị, maka ọnụ ọgụgụ a ga -ewere dị ka onye isi, ọ ga -enwerịrị nkewa abụọ dị iche iche. Nọmba 2 nwere naanị nkewa, yabụ na ọ bụghị isi ma ọ bụ ihe mejupụtara.
Enweghị ike ikewa 0 n'onwe ya, ebe nsonaazụ ya edoghị anya.
Yabụ ọ bụrụ na anyị ewepụ 0 na 1 na listi ahụ, n'ime ọnụ ọgụgụ buru ibu nke nọmba fọdụrụ, kedu ka anyị ga -esi mara nke kacha mma na nke na -adịghị?
Etu ị ga -esi mara ma ọ bụrụ na ọnụọgụ bụ nke mbụ
Kacha nkịtị bụ iche maka ime ya site na ịtụfu, ya bụ, ịnwa ịchọta ndị nkewa. Site na ihe mgbako ọ na -adị ngwa ngwa, mana ọ bụrụ na anyị ga -eme ya ihu ma ọ bụ jiri mkpịsị akwụkwọ na akwụkwọ, ihe na -agbagha. Anyị na -akụziri gị ụzọ abụọ iji mara ma ọnụọgụ dị mkpa ma ọ bụ na ọ bụghị.
Ihe nnọchianya nke Eratosthenes
Nnọchi nke Eratosthenes bụ a teknụzụ iji mara ọnụọgụ ọnụọgụ dị n'etiti 2, nke bụ nọmba mbụ mbụ, na ọnụ ọgụgụ ụfọdụ.
Usoro a gụnyere ịme tebụl na ịgafe ọtụtụ ọnụọgụ niile. Mbụ anyị ga -ewepụ ọnụọgụ nke 2, mgbe ahụ 3, na ihe ndị ọzọ ruo mgbe anyị rutere ọnụọgụ nke nwere akụkụ anọ karịrị nke ikpeazụ na tebụl.
Dịka ihe niile dị na mgbakọ na mwepụ, a na -aghọta myọ Eratosthenes nke ọma site na iji atụ:
Anyị na -eme tebụl nwere ọnụọgụ sitere na 2 ruo 30.
Anyị na -esi na ndepụta apụta, nke pụtara, anyị na -esi na 2 ruo 2: 2, 4, wdg. Lee anya! 6, nke enwere ike kewaa naanị ya na nọmba 2, anyị anaghị agafe ya, ebe ọ bụ nọmba kacha.
Anyị na -ewere nọmba na -esote, 3, wee chọpụta na akụkụ anọ pere mpe karịa ọnụọgụ kacha ukwuu na tebụl. Dị ka 32 <30, anyị na -aga n'ihu na myọ wee gafere ọtụtụ ya: 6, 9, 12 ... Dịka na nzọụkwụ gara aga, anyị anaghị agafe nọmba 3, nke bụkwa isi.
Anyị na -eji nọmba na -esote na tebụl megharịa usoro nke gara aga: 4 gafere, yabụ anyị were 5. Dị ka 52 <30, anyị na -agafe ọtụtụ ha.
Anyị na -aga n'ihu na nọmba na -esote na -agafeghị: 7. Dị ka 72 = 49, ya bụ, square nke 7 karịrị ọnụọgụ ikpeazụ dị na tebụl, usoro ejedebe, ọnụọgụ ndị na -enweghị ịgafe bụ nọmba kacha mkpa.
Mmechi. Nọmba ndị dị n'etiti 2 na 30 bụ: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 na 29.
Mpekere Eratosthenes bụ ụzọ dị mfe ma dịkwa mfe ịmata ọnụọgụ ndị mbụ, mana kedu makagịnị ma ọ bụrụ na ọnụọgụ anyị chọrọ ịmụ dị oke elu, dịka ọmụmaatụ, 54657?
Dịka ị ghọtara, ọ gaghị adị mma ịme tebụl site na 2 ruo 54657, nri? Gịnị ka anyị ga -eme mgbe ahụ? Dị mfe: jiri njirisi nkewa.
Ụkpụrụ nkewa bụ iwu iji chọpụta ma ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ kewaa onye ọzọ na -enweghị nkewa.
Yabụ, ọ bụrụ na anyị ejiri iwu ndị a wee hụ na a na -ekewa ọnụọgụ site na nọmba ọzọ na -abụghị ya na nkeji, anyị ga -amata na ọ bụghị nke kacha mkpa.
Nkọwa nke nkewa nke nọmba 2. A ga -ekewa nọmba site na 2 ma ọ bụrụ na ọ bụdị, ya bụ, ọ bụrụ na ọ gwụchaa na 0, 2, 4, 6 ma ọ bụ 8. Ma, nke a bụ aghụghọ: dị ka ọnụọgụ ọ bụla nke 4 kewara, 6 ma ọ bụ 8 na -ekewa site na 2, ọ gaghị adị anyị mkpa ịma njirimara nkewa nke ọnụọgụ ndị ọzọ.
Nkọwa nke nkewa nke nọmba 3. A ga -ekewa nọmba site na 3 ma ọ bụrụ na ngụkọta nke ọnụọgụ ya bụ otutu nke atọ. Ka anyị hụ otu ihe atụ:
Ebe ọ bụ na 15 bụ ọnụọgụ nke 3, a ga -ekewa 267 site na 3.
Na mgbakwunye, ebe ọnụọgụ ọ bụla kewara site na 9 na -ekewa site na 3, ọ ga -ezuru anyị ịmara ọkwa a.
Nkọwa nkewa nke nọmba 5. A ga -ekewa nọmba site na 5 ma ọ bụrụ na ọ mechie na 0 ma ọ bụ 5.
Usoro maka nkewa nke nọmba 7. Iji chọpụta ma a ga -ekewa nọmba site na 7, anyị ga -ebipụ ọnụọgụgụ na -enweghị ọnụọgụ ikpeazụ yana ugboro abụọ ọnụọgụ ikpeazụ. Ọ bụrụ na ọnụọgụ enwetara bụ 0 ma ọ bụ otutu nke 7, a ga -ekewa nọmba mbụ site na 7. Ị ga -eji nke ọma ghọta nke a nke ọma, ka anyị nweta ya!
Ebe ọ bụ na 21 bụ ọnụọgụ nke 7, a ga -ekewa 378 site na 7.
Nkọwa nke nkewa nke nọmba 11. Ọ bụrụ na anyị ewepu nchikota ọnụọgụ ọnụọgụgụ na ọnụ ọgụgụ ọnụọgụ adịghị mma, na ọnụọgụ enwetara bụ 0 ma ọ bụ otutu nke 11, nke ahụ pụtara na a ga -ekewa nọmba ọmụmụ site na 11. Lee atụ:
Ebe ọ bụ na 11 bụ ọnụọgụ nke 11, a ga -ekewa 8591 site na 11.
Na nke ahụ niile! Ugbu a ọ bụ oge gị: ị ga -amala ka esi agbakọ ma ọnụ ọgụgụ ahụ dị elu, 54657, bụ isi?
Ndepụta nọmba dị mkpa sitere na 1 ruo 10.000
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ị na -achọ ndepụta nke ọnụọgụ ọnụọgụ dị n'etiti 1 ruo 10.000, dị ka 1 ruo 100 ma ọ bụ 1 ruo 1.000, nke a bụ nke zuru oke na emelitere:
Inicio » omenala » Nọmba Prime site na 1 ruo 10.000